लाटोकोसेरो तथा हुचील संरक्षणमा हातेमालो गरौं ! | Alagdhar
घरBanner Newsलाटोकोसेरो तथा हुचील संरक्षणमा हातेमालो गरौं !
लाटोकोसेरो तथा हुचील संरक्षणमा हातेमालो गरौं !
खोटाङ : खोटाङ जिल्लाको जालपामा अन्तर्राष्ट्रिय लाटोकोसेरो महोत्सवको अवसर पारेर ‘नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचील उत्सव २०७५’ आयोजना गरिने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालीका वडा नम्बर १२ जालपा तथा प्रकृतिका साथीहरु नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम गर्न लागेको छ । यसका लागि ‘नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचील उत्सव’ आयोजक मूल समिति श्री विकास राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । तेसैगरि टंक राईको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिती र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन थप ११ वटा उपसमीतीहरु समेत गठन गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै पालीका प्रमुखहरु सदस्य रहनेगरि उत्सव संयोजन समिती समेत गठन गरिएको छ । उक्त उत्सवको लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालीका, प्रकृतिका साथीहरु, १ नम्बर प्रदेश सरकार तथा अन्य पालीकाहरु लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
उत्सव यही माघ १८ र १९ गते दुई दिन गरिने छ । किसानको साथी भनेर चिनिने तर संरक्षणको हिसाबले ओेझेलमा परेको लाटोकोसेरो तथा हुचीलहरुको संरक्षणका लागि यो उत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलहरुको माध्यमबाट पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्य समेत राखिएको छ । नेपालमा यस किसिमको उत्सव मनाउन थालिएको ७ वर्ष भएको छ । यसअघि यो उत्सव धादिङ, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, कास्की, कपिलवस्तु र दोलखा जिल्लामा सम्पन्न गरिसकिएको छ । यस किसिमको उत्सव नेपालबाहेक अमेरिका र इटालीमा पनि मनाइन्छ । यसवर्षदेखि भारतको पुनामा पनि मनाउन थालिएको छ ।
उत्सव शूरु हुनु दुई हप्ता अघि नै विभिन्न विद्यालयहरुमा लाटोकोसेरो चेतना शिवीरहरु सञ्चालन गरिने छ। उत्सवको पहिलो दिन चरा अवलोकन , प्रकृतिको फोटो खिच्ने कार्यक्रम लाटोकोसेरा सम्बन्धी लघु म्युजियम प्रदर्शनी, स्थानीय लोपोन्मुख खेलहरु (घिर गाडे, झुलो चकमक, लाथ्रो काट्ने) को प्रर्दशनी तथा प्रतियोगिता गरिने छ भने राती लाटोकोसेरोको महत्व दर्शाउने खालका स्लाइड तथा भिडियो प्रदर्शनी गरिने छ । दोस्रो दिन संरक्षण, संस्कृतिलाइ विशेष जोड दिइने आयोजकले जनाएको छ । उत्सवलाई जिवन्त बनाउन स्थानीय डम्फु र सेलो (तामाङ), सेब्रु (शेर्पा), साकेला (तोसी) र मारुनि (राई), संगिनि नाच (हिन्दु महिलाहरुको), सालैजो (गुरुङ), बालन, सडक नाटक, हाक्पारे गित (बुढा बुढीहरुको लयमा गाईने नेपाली भाषाको गित), स्थानिय बाजाहरु (एकैसाथ मुचुङ्गा, पीपीरी, यलम्बर, मादल, बासुरी) को प्रदर्शनी समेत गरिनेछ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराका विद्यार्थीहरुले लाटोकोसेरो संरक्षण सम्बन्धि नाच समेत प्रर्दशन गर्नेछन् ।
उक्त अवसरमा विद्यालयस्तरीय लाटोकोसेरो चित्रकला, निबन्ध, कथा तथा कविता प्रतियोगिता समेतको आयोजना र प्रदर्शनी गरिनेछ । सोही प्रदर्शनीमा लाटोकोसेरोको जानकारी भएको सूचनाहरु, चित्रहरु, तथा फोटोहरुको प्रदर्शनी समेत गरिने छ । गहुँको छ्वालीबाट, चुराबाट तथा माटोबाट बनाइएका लाटोकासेरोहरु समेत प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । आठवटा लाटोकोसेरोको आवाज सुन्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उत्सवमा सहभागी हुने जो कसैका अनुहारमा तथा नङमा लाटोकोसेरो तथा हुचीलको चित्रसमेत बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । उत्सवमा लाटोकोसेरोको एक फिट अग्लो रोबोट समेत प्रदर्शनी गरिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयबाट लाटोकोसेरोको नमुनाहरुपनि प्रदर्शनीमा राखिने छ ।
लाटोकोसेरो तथा हुचील उत्सवको सम्झनामा एक महोत्सव स्तम्भ समेतको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा स्थानिय रुपमा उत्पादन भएका सामाग्रीहरुको प्रदर्शनी तथा विक्रीवितरणको समेत व्यवस्था गरिएको छ । माघ १७ र १८ गते निशुल्क स्वास्थ शिवीर समेत गर्न लागिएको छ । उक्त अवसरमा दाँत र महिला सम्बन्धि रोगहरुको उपचारलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचील उत्सव किन ?
गैँडालगायतका वन्यजन्तुहरुकै हाराहारीमा सिकार तथा अवैध व्यापार हुन थालेपछि यिनको संरक्षणमा पनि चासो बढेको हो । औषधी, झारफुक तथा घरमा पाल्नका लागि भारत, चीन लगायत विभिन्न खाडी मुलुकहरुमा यिनको अवैध कारोबार हुने गर्दछ । प्रकृतिका साथीहरु नामक संस्थाले ४६ वटा जिल्लामा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा नेपालबाट वार्षिक कम्तीमा २००० वटासम्म लाटोकोसेराहरु तथा हुचीलहरु मारिने तथा विभिन्न मुलुकहरुमा अवैध रूपमा पठाइने गरेको भेटिएको छ । यसका अतिरिक्त गुलेलीको प्रयोग गरि लाटोकोसेरोलगायत चराहरु मार्ने गरेको भेटिएको छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले गुलेली प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । मानिसहरुले लाटोकोसेरोको बच्चाहरुलाई गुँडबाट निकालेर पाल्ने गरेको पनि भेटिएको छ । यसका अतिरिक्त लाटोकोसेरोको वासस्थान विनास समेत तीव्र रूपमा भइरहेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा लाटोकोेसेरोलाई पाल्न, दुःख दिन, बेच्न नपाइने बारे स्थानीयलाई जानकारी कम रहेको भेटिएको छ । साथै यसले कृषि क्षेत्रमा गर्ने महत्वपूर्ण योगदानबारे पनि उनीहरु अनभिज्ञ नै देखिएका छन् । स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई यसबारेमा जानकारी दिई लाटोकोसेरो तथा हुचील संरक्षणमा टेवा पुगोस भनेर यो उत्सव गर्न लागिएको हो ।
मुसाहरुको संख्या नियन्त्रण गरेर किसानलाई सहयोग गर्ने भएकोले यसलाई किसानको वास्तविक साथी भनिन्छ । यिनको एक परिवारले (भाले, पोथी र बच्चाहरु) एक सिजनमा ३००० वटासम्म मुसाहरु खाने गर्छन् । मुसाबाहेक यिनले किरा फट्याङग्रा, सर्प, भ्यागुताको संख्या पनि नियन्त्रण गर्दछन् । धार्मिक हिसाबले समेत लाटोकोसेरोहरुलाई देवी लक्ष्मीको वाहन मानिन्छ । पर्यावरणलाई सन्तुिलत राख्न पनि यिनको मुख्य भूमिका रहन्छ । यिनको उपस्थितिले प्रकृति स्वस्थ छ भन्ने संकेत गर्दछ । लाटोकोसेरोसहित सम्पूर्ण चरामा आधारित पर्यापर्यटन विकासमार्फत मानवीय जिविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुग्दछ । यिनीहरुको आवाजले साँझ परेको तथा बिहान भएको संकेत समेत गर्दछ ।
लाटोकोसेरा प्राय राती तथा बिहान सक्रिय हुने र सिकार गर्ने चरा हो । त्यसो त यसले दिउँसो पनि आँखा देख्दछ । यिनीहरुकोे देख्ने तथा सुन्ने दुवै क्षमता अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । यिनीहरुले रुखको टोड्को, भुइँमा तथा पहराहरुमा फुल पार्छन् र बच्चा कोरल्छन् । यिनको शरीरको तौल ३१ ग्रामदेखि लिएर ४ किलो ५०० ग्रामसम्मको हुने गर्दछ । लाटोकोसेराको शरिर अत्यन्तै हलुका तथा नरम भुवाहरुले ढाकेको हुनाले उड्दाखेरि आवाज आउँदैन । यिनीहरुले आपm्नो टाउकोलाई एकापट्टिमात्रै पनि २७० डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छन् । नेपालमा यिनीहरुको वासस्थान तराइदेखि हिमालसम्म फैलिएको छ । यिनको संख्याको बारेमा नेपालमा अध्ययन नभए पनि हालसम्म २३ प्रकारका लाटोकोसेरोको प्रजातीहरु अभिलेख गरिसकिएको छ जसमध्ये ८ प्रजातीहरु नेपालमा दुर्लभ मानिन्छन् । यसमध्य दुईवटा प्रजातीहरुलाई लामो समय देखि नेपालमा अभिलेख गरिएको छैन् । विश्वमा करिब २२५ प्रजातीका लाटोकोसेराहरु पाइन्छन् ।
अघिल्लो लेखमाविपी प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ सेवाका लागि तीन विभाग थपिए
अर्को लेखमाभारतीय सीमा क्षेत्रवाट भित्रिएका अण्डा मा निगरानी